Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Gunyana 01, 2021
Vanhu vatatu vakafa nechirwere che Covid-19 nezuro, uye vamwe vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare.
Ishe Beperere vekuMashonaland West vanoshaya nechirwere cheCovid-19 muHarare.
Hurumende inopinza basa varairidzi zviuru zvitatu kutanga kotoro ino asi sangano rinomirira vakuru vezvikoro, reZimbabwe National Union of School Heads, rinoti huwandu hwevarairidzi ava hushoma zvikuru kana zvichienzaniswa nehwevarairidzi vakasiya basa kubva gore rapfuura kusvika pari zvino.
Masangano akazvimirira oga anoti hurumende yava kushandisa mitemo yekurwisa vanopfurikudza mwero kuvhiringidza mashandiro avo. Mashoko aya anotevera danho rakaitwa nedare remakurukota nezuro rekubvumidza kuvandudzwa kwemutemo wemashandiro emasangano aya.
Gungano guru repagore reZim Expo rotarisirwa kutanga neChishanu chino muguta reDallas mudunhu reTexas muAmerica, paine zviratidzwa, hurukuro pamwe nemitambo nezvimwe zvakasiyanasiyana, kusanganisirawo vaimbi vane mukurumbira vari kubva kuZimbabwe.